DHAGEYSO WAREYSI: Maxaad ka Ogtahay halka ay mareyso Cafintii deynta lagu leeyahay Soomaaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO WAREYSI: Maxaad ka Ogtahay halka ay mareyso Cafintii deynta lagu leeyahay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Fedeeralka ah ee Soomaaliya oo shalay Shir jaraa’id u qabtay Warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya dalka Deynta ugu badan uu ku leeyahay Mareykanka.
Wuxuuna sheegay, in Mareykanka kaliye uu ku leeyahay lacag gaareysa 1 Bilyan oo Dollar, halka Rushka uu ku leeyahay 700 oo Milyan iyo Talyaaniga oo Soomaaliya ku leh 600 Milyan iyo dalal kale.
Mr. Beyle ayaa sidoo kale tilmaamay in wadamada lacagta ku leh Soomaaliya ay la shireen ayna go‘an ku gaareen in Soomaaliya deynta laga cafiyo.
Wuxuu intaasi ku daray in Madaxwayne ku-xigeenka Bangiga Aduunka ee Muqdisho yimid uu sheegay in Soomaaliya ay u haayaan lacag dhan 700 oo milyan oo ay heleyso Saddexda sano ee soo socota.
Ugu dambeyn, Wasiir Beyle ayaa xusay in miisaaniyadda dalka ay kobcayso taasina ay sababtay in Ciidanka qalabka sida oo uu tilmaamay in ay markii hore ay qaadan jireen 130 doolar hadda loogu daro 70 doolar sidaasna ay kuqaataan lacag dhan 200 oo Dollar.
Halka hoose ka dhageyso Codka Wasiir Beyle:
Halka ay mareyso cafinta deynta Soomaaliya